Maxaa ka run ah in R/W Kheyre u diray digniintii ugu dambeysay Wasiir Islow oo xilka looga qaadayo? | Maxaa ka run ah in R/W Kheyre u diray digniintii ugu dambeysay Wasiir Islow oo xilka looga qaadayo? | Hal Sheegaha La Hubo
Maxaa ka run ah in R/W Kheyre u diray digniintii ugu dambeysay Wasiir Islow oo xilka looga qaadayo?
R/Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo kullan gaar ah xafiisa kula qaatay Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya ayaa wuxuu kula dardaarmay in si aad ah loo adkeeyo amaanka dalka guud ahaan gaar ahaan amaanka caasimadda Muqdisho,maadama beri uu ku sii jeedo Imaaraadka carabta.
Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka shidaal qaadanayo wixii gelinta danbe ilaa iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu Wasiirka Amniga uga digay in la dayaco amaanka Muqdisho,islamarkaana cadowga fursad loo siiyo iney carqalad la mid ah tii xalay ay mar kale sameeyaan.
Ilo ku dhow Xafiiska Ra’iisal wasaaraha ayaa inoo sheegay in Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya u sheegay Wasiirka Amniga inuu aad uga xun yahay weerarkii xalay shabaab ku soo qaadeen Muqdisho.islamarkaana ku gumaadeen dad shacab iyo askar ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow ayaa balan qaaday inuu si dhow ula soconayo dhaq dhaqaaq xaalada amniga Muqdisho,wuxuuna sidoo kale sheegay inuu dardaaran adag siinayo Laamaha amaanka Dowladda gaar ahaan kuwa Gobolka Banaadir.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay diyaarineyso Ciidamo dheeraad ah oo la geeyo baraha Kontarol ee magaalada Muqdisho si amaanka loo adkeeyo.
Ku dhawaad 30-Qof ayaa ku dhawaacatay weerarkii safmareenka ahaa ee shabaab ku soo qaadeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo Nabad sugida.